अर्थ​ – Page 81 – YesKathmandu.com
एस काठमाडौं बुधबार २८, माघ २०७१
वीरगन्ज । नेपाली कृषकले भारतमा बेच्न लगेको उखु भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सीमामा रोकेपछि उत्पन्न समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासले भारतीय चिनी मिलमा उखु बेच्न इजाजत दिए पनि…
यी हुन् संसारका ६ धनाढ्य व्यक्ति
७८ वर्षीय अमान्सियो अर्टेगासँग ६२.६ अर्ब डलरबराबरको सम्पत्ति छ । यिनको सम्पत्तिको स्रोत रिटेल अर्थात् फुटकर बिक्री हो । अर्टेगाले सुरुमा एक कपडा पसलमा काम गर्थे । उनका पिता रेलवेका कर्मचारी थिए । (more…)
काठमाडौं । ५९ वर्षीय उद्योगपति विनोद चौधरी विश्वका अर्बपतिको सूचीमा फेरि परेका छन् । ‘फोर्ब्स’ पत्रिकाले तयार पारेको अर्बपति सूचीमा चौधरी १५९ स्थान माथि उक्लिएर १३०६औं स्थानमा पुगेका छन् । उनी यसअघि १४६५औं स्थानमा थिए…
एस काठमाडौं सोमबार २६, माघ २०७१
काठमाडौं । स्विजरल्यान्डको निजी बैंक एचएसबीसीको खातामा नेपालीको ५४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै पाँच अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सूची सार्वजनिक भएको छ । स्विस बैंकको सूचना लिक गर्ने आईसीजेको सूची हालै सार्वजनिक भएको…
आगोले स्वाहा भो कपास कारखाना
एस काठमाडौं आइतबार २५, माघ २०७१
भक्तपुर, २५ माघ । अनन्तलिंश्वर नगरपालिका–१ मा शनिबार राति आगलागी हुँदा ३३ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । दमकल चालक रञ्जित श्रेष्ठको मृत्युसमेत भएको छ । बालकोटमा रागिनी आर्ट ग्यालरीसँगै रहेको कपास कारखानामा राति ९…
एस काठमाडौं शुक्रबार २३, माघ २०७१
भारतका वैज्ञानिक डा. श्रीनिवासनले २० वर्षको खोजपछि विश्वमा पहिलोपटक यसको सूत्र तयार पारेका हुन् । त्यही सूत्रबाट बनेको रक्सीमा हर्बल अर्थात् प्राकृतिक केमिकल छन्, कृत्रिम छैनन् । हर्बल मेडिसिनका विज्ञ डा. श्रीनिवासनले यही खोजबाट रेजिडेन्स…